ထိုင်းထီ ပထမဆုကြီး ဘတ်သန်း ၉၀ ပေါက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး သူ့ရဲ့မွေးနေ့တွင် ရွှေဆွဲကြိုးနှင့် ဘတ်ငွေများကို ဝေဟင်မှ ကြဲချပေးလှူ ~ Myanmar Online News
ထိုင်းထီ ပထမဆုကြီး ဘတ်သန်း ၉၀ ပေါက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး သူ့ရဲ့မွေးနေ့တွင် ရွှေဆွဲကြိုးနှင့် ဘတ်ငွေများကို ဝေဟင်မှ ကြဲချပေးလှူ
7:09 AM နိုင်ငံတကာသတင်း No comments
ထိုင်းနိုင်ငံ အူဒွန်ဌာနနီခရိုင် ကုမ္ဖဝါပီမြို့နယ် နောင်ဝါ့ကျေးရွာအုပ်စု ဘန့်နောင်ဟိယတွင်နေထိုင်သူ Miss. Wannaree Panyasai သည် ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူမ၏ အသက် ၄၈ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် သူမနေထိုင်သည့်ရပ်ကွက်သူ ရွပ်ကွက်သား ၃၀၀၀ ခန့်ကို ဖိတ်ကြားကာကြွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ပြီး ဝေဟင်မှနေ၍ Paramotor ၁၀ စီးဖြင့် သူမလက်မှတ်ပါသော ရွှေတစ်မတ်သား ဆွဲကြိုး ၃၀ ကုံးရဲ့ဘောက်ချာနှင့် ဘတ်ငွေ ၂၀ တန်များကို ကြဲချပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ် ။
သူမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့က ထွက်သွားတဲ့ ထိုင်းထီ ပထမဆုကြီး ၁၅ စောင်တွဲ ၊ ဘတ်သန်း ၉၀ ပေါက်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ယခုလိုသူမရဲ့မွေးနေ့မှာ အမှတ်တရအဖြင့် Hilight အဖြင့် အမျာပြည်သူကို သူ့လိုကံကောင်းစေချင်လို့ဆိုပါတယ် ။
မွေးနေ့လာကြသူအများပြည်သူများကို မြို့နယ်ကျမ္မာရေးဌာနမှ တစ်ဦးချင်းကိုယ်အပူချိန်တိုင်းတာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီး Mask များလည်းပေးဝေခဲ့ပါတယ် ၊ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူး Suraphon Thoung Ngean ကိုယ်တိုင်ဦးစီးကာ အင်အား ၁၀ ဦးအပါ အခြားအဖွဲ့ဝင်များမှလုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
ရွှေဘောက်ချာကောက်ရသူတွေအနေနဲ့ သူမထံမှာလာရောက်ပြီး ရွှေတစ်မတ်သားနဲ့ လဲလှယ်ထုတ်ယူရကြပါတယ် ၊ သူတို့တွေပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုလေးတွေကို မြင်ရတာပီတိဖြစ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ၊ စုစုပေါင်း တန်ဘိုး ဘတ် ၃ သိန်းရှိပါတယ် ။
ထိုင်းနိုင်ငံ အူဒွန်ဌာနနီခရိုင် ကုမ္ဖဝါပီမြို့နယ် နောင်ဝါ့ကျေးရွာအုပ်စု ဘန့်နောင်ဟိယ တွင်နေထိုင်သူ Miss. Wannaree Panyasai သည် ယနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သူမ၏ အသက် ၄၈ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့တွင် သူမနေထိုင်သည့်ရပ်ကွက်သူ ရွပ်ကွက်သား ၃၀၀၀ ခန့်ကို ဖိတ်ကြားကာကြွေးမွေးဧည့်ခံခဲ့ပြီး ဝေဟင်မှနေ၍ Paramotor ၁၀ စီးဖြင့် သူမလက်မှတ်ပါသော ရွှေတစ်မတ်သား ဆွဲကြိုး ၃၀ ကုံးရဲ့ဘောက်ချာ နှင့် ဘတ်ငွေ ၂၀ တန် များ ကို ကြဲချပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ် ။